October 14, 2021 - Achawlaymyar
October 14, 2021 by Achawlaymyar
ရန္ကုန္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕မွာ လွ်ပ္စစ္မီတာခ မေပးေဆာင္ပါက မီးျဖတ္မည္ဟု လိုက္လံသတိေပးေန ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕မွာ လွ်ပ္စစ္ဝန္ထမ္းမ်ားက မီတာခ မေပးေဆာင္ပါက မီးျဖတ္မည္ဟုဆိုကာ လိုက္လံသတိေပးမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ေန ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္အရ သိရပါတယ္။ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ား ေပးေဆာင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စမ္းေခ်ာင္း၊ အလုံ စသည့္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္႐ုံးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေနအိမ္မ်ားသို႔ လိုက္လံကာ သတိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ “ဒီေန႔ စမ္းေခ်ာင္း ခ်မ္းသာလမ္းထဲကို ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္႐ုံးက ဝန္ထမ္း ၃ေယာက္ သြားတယ္။ ၂လပိုင္းကတည္းက မီတာမေဆာင္ထားဘူးဆိုတာနဲ႔ မီးျဖတ္မယ္ဆိုတာ လာ သတိေပးသြားတယ္”လို႔ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနထိုင္သူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး အလုံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာလည္း ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္႐ုံးမွ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕သည္ ေနအိမ္တိုက္ခန္းမ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္မီတာခေပးေဆာင္ရန္ အတင္းအက်ပ္ ေျပာဆိုျခင္း မ်ားရွိတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ … Read more
အစားအသောက် ဝယ်စားတဲ့အခါ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်မှုနဲ့ အရသာ ကောင်းမွန်မှုတို့က အဓိကကျပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်မှာ မှာစားတဲ့အခါ ဆံပင်ပါလာရင်တောင် အတော့်ကို စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် စားစရာထဲမှာ လူသား လက်ချောင်းပြတ်ကြီး ပါလာမယ် ဆိုရင်တော့ လုံးဝကို အန်ထွက်မိမှာပါ။ ဘိုလီဗီးယားနိုင်ငံက Estefany Benitez က အမြန်ပြင် စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်မှာ ဟမ်ဘာဂါတစ်လုံး ဝယ်စားတဲ့အခါ လူသားလက်ချောင်း တစ်ချောင်းပါလာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ လက်ချောင်းကလည်း ပုပ်နေပါပြီ။ သူမက အဲဒီလက်ချောင်းပုံကို facebook မှာတင်ပြီး စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ တာဝန်ရှိသူနဲ့ စကားပြောဖို့စောင့်နေပါပြီ။ အဲဒီဘာဂါ စတိုးဆိုင်ကနေ အသင့်ရောက် လာတာဖြစ်ပြီး အရင်က ဒီလိုမျိုး တစ်ခါမှ မဖြစ်ဖူးကြောင်း Hot Burger စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်က ပြောပါတယ်။ … Read more
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းသူ့ရဲ့ပရိတ်​သတ်တွေဆီက အလှူငွေကောက်ခံပြီးမြန်မာပြည်အတွက် လှူဒ္ဒါန်းမယ့် Sinon Loresca Sinon Loresca ကတော့ Cat Walk King အဖြစ် ထင်ရှားကျော်ကြားသလို မော်ဒယ်လ်၊ သရုပ်ဆောင်အဖြစ်လည်း အောင်မြင်နေသူတစ်ယောက်ပါ ။ သူ့ရဲ့ရိုးသားပွင့်လင်းပြီးကူညီချင်တဲ့စိတ်ကြောင့် လူတွေကသူ့အပေါ်ပိုပြီသတိထားမိလာကြတာပါ။သူကအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ပေမယ့်လို့ လူတန်းစားမခွဲဲခြားပဲဆက်ဆံသူပါ။ Sinonက မြန်မာပြည်ကိုချစ်သလိုမြန်မာအစားအသောက်တွေကိုကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်ပါတယ်။မရှိဆင်းရဲသားတွေလမ်းပေါ်ကလူတွေကို တတ်နိုင်သလောက်အမြဲလှူဒ္ဒါန်းနေတာပါ။ အခုဆို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ရောဂါကအများအပြားပျံ့ပွားနေတဲ့အပြင်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းအောက်စီဂျင်စက်တွေပါ ရှားပါးနေတာကိုသိရတော့ သူရဲ့လုပ်ပေးမယ့်ဆန္ဒတစ်ခုကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ “ကျတော်ချစ်သော မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရေအခုမြန်မာမှာဖြစ်နေတဲ့ COVID -19 THIRD WAVEကြောင့် တော်တော်ဆိုးဆိုးဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့ ကျတော်ကြားသိရပါတယ် ဒါကြောင့် ကျတော်နောက်အပတ်ထဲမှာ ကမ္ဘာတစ်၀န်းမှာရှိကြတဲ့ကျတော့် ပရိတ်သတ်တွေ ဆီက ကျတော် အလှူငွေ ကောက်ခံပါ့မယ်ရလာတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို မြန်မာ မှာ အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်နေတဲ့သူ‌ေတွေကို လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် အားတင်းထားပါအုံး မြန်မာ ပြည်ကြီးနဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေရေခင်ဗျားတို့မှာ ကျတော်ရယ် ကမ္ဘာကြီးရယ် ကျန်ပါသေးတယ်ကျတော်တို့တူတူ … Read more
October 14, 2021 October 14, 2021 by Achawlaymyar
Liu ဟာ သူ့မှာသား ၃ ယောက်ရှိပြီး သူရဲ့သားများကိုထောက်ပံ့ရန် မြို့သို့သွားပြီး အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Liu ဟာ မြို့မှာပင်ပန်းတဲ့အလုပ်များစွာကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း သားသုံးယောက်ရဲ့ လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ထိုက်တန်တယ်လို့ထင်နေခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ အပြင်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးနောက် အသက် ၇၀ နီးပါးရှိပြီးဖြစ်တဲ့ Liu ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ယခင်လို့ ပင်ပန်းတဲ့အလုပ်များကိုမလုပ်နိုင်တော့တာကြောင့် Liu ဟာ သူရဲ့ဇာတိမြို့သို့ ပြန်လာခဲ့ ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သူ့သားများနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအတူမနေခဲ့ရသလို သားများရဲ့အကျင့်စရိုက်ကိုသေချာမသိနေတာကြောင့် Liu ဟာ သူ့အပေါ် သားသုံးယောက်ရဲ့ သဘောထားကိုစုံစမ်းရန် သူ့ကိုယ်သူ သူတောင်းစားတစ်ဦးလိုဟန်ဆောင်ကာ ရွာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ Liu က သားအကြီးဆုံးရဲ့အိမ်သို့သွားပြီး အကြီးဆုံးသားအား “ သား၊ အဖေပြန်လာပြီ” လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ အကြီးဆုံးသားက သူ့ကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးကြည့်ပြီး စက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မျက်နှ ာထားနှင့် Liu အား ပြင်းထန်စွာ … Read more
ရဲတိုက်အမှု သက်သေထွက်မည့် တပ်ကြပ် ဆိုင်ကယ် မတော်တဆဖြစ်၍ ….
ရဲတိုက်အမှု သက်သေထွက်မည့် တပ်ကြပ် ဆိုင်ကယ် မတော်တဆဖြစ်၍ အမှု မစစ်နိုင် ဧရာဝတီ၊ အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၂၁ သရုပ်ဆောင် ရဲတိုက်အား မရမ်းကုန်းမြို့နယ် တရားရုံးတွင် စွဲဆိုထားသည့် အမှု ရုံးချိန်းကို ယနေ့ (အောက်တို ဘာလ ၁၄ ရက်) အင်းစိန်ထောင်တွင်း အထူးတရား ရုံး၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရုံးချိန်းတွင် တရားလိုပြသက်သေ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရဲစခန်းမှ တပ်ကြပ်ကြီး အေးလွင်အား စစ်ဆေးရန် ချိန်းဆိုထားသော်လည်း အမှု ထွက်ဆိုရန် လာရောက်စဉ် ဆိုင်ကယ် မတော်တဆ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကြောင့် အမှုမစစ် ဆေးနိုင်ဘဲ ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရကြောင်း ရဲတိုက်၏ ရှေ့နေဖြစ်သူ ဥပေဒအကြံပေး ဦးခင်မောင်မြင့်ထံက သိရသည်။ ဦးခင်မောင်မြင့်က “မရမ်းကုန်းမြို့နယ် တရားရုံးမှာ ချိန်းဆိုထားတဲ့ မူးယစ်/ စိတ်ပြောင်း ပုဒ်မ … Read more
လူထုက လႉခဲ့တဲ့မ်က္ႏွာမေထာက္ဘဲ လူ သ တ္ ေကာင္နဲ႔လက္ဆြဲသြားေနတဲ့ သီတဂူဆရာေတာ္ကို ေဒၚ႐ိုစီေျပာၿပီ….
လူထုကလေးစားပွီး လှူခဲ့ ကြှေးခဲ့တဲ့မကြျနှာမထောကျဘဲ လူ သ တျ ကောငျ မအလနဲ့လကျဆှဲသှားနတေဲ့ သီတဂူဆရာတောျကို ဒေါျရိုစီ ပှဲကွမျး လူထုက လှူခဲ့တဲ့မကြျနှာမထောကျဘဲ လူ သ တျ ကောငျနဲ့လကျဆှဲသှားနတေဲ့ သီတဂူဆရာတောျကို ဒေါျရိုစီ ပှဲကွမျး အောကျဆုံးတှငျvideoပါသညျ….. လူထုကလေးစားပွီး လှူခဲ့ ကြှေးခဲ့တဲ့မကြျနှာမထောကျဘဲ လူ သ တျ ကောငျ မအလနဲ့လကျဆှဲသှားနတေဲ့ သီတဂူဆရာတောျကို ဒေါျရိုစီ ပှဲကွမျး လူထုက လှူခဲ့တဲ့မျက်နှာမထောက်ဘဲ လူ သ တ် ကောင်နဲ့လက်ဆွဲသွားနေတဲ့ သီတဂူဆရာတော်ကို ဒေါ်ရိုစီ ပွဲကြမ်း အောက်ဆုံးတွင်videoပါသည်….. လူထုကလေးစားပြီး လှူခဲ့ ကျွေးခဲ့တဲ့မျက်နှာမထောက်ဘဲ လူ သ တ် ကောင် မအလနဲ့လက်ဆွဲသွားနေတဲ့ သီတဂူဆရာတော်ကို ဒေါ်ရိုစီ ပွဲကြမ်း လူထုက လှူခဲ့တဲ့မျက်နှာမထောက်ဘဲ … Read more
အမျိုးသမီးတစ်ဦးအနေနဲ့ အလှအပကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် ငွေရင်းနှီးခြင်းက အမျိုးသမီးအများစုရဲ့ မရှိမဖြစ်ပြုလုပ်လိုတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ် ။ ထို့ပြင် ယနေ့ခေတ်ကဲ့သို့ အလှအပလုပ်ငန်းက လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်မှာ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာက ယခင်ကထက် ပိုမိုလွယ်ကူလာခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ လှပအောင်ပြုပြင်ခဲ့ရာကနေ တချို့လူတွေက ပိုပြီးတောင် ရုပ်ဆိုးသွားတာတွေ ရှိပါတယ် ။ မကြာသေးခင်က အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ နှုတ်နီဆိုးစရာမလိုအောင် နှုတ်ခမ်းကို ပြုပြင်ခွဲစိတ်ရန် တက်တူးထိုးလိုက်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့ ၎င်းဟာ ရုတ်တရက် နီရဲစွာ ရောင်ရမ်းလာပြီး ပျားတုပ်ခံရသလိုပင် တူနေခဲ့ပါတယ် ။ ဓာတ်ပုံများမဝေမျှမီ အလှအပနယ်ပယ်မှ အမျိုးသမီးအချို့က မိန်းကလေးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က အလွန်ဆိုးရွားလွန်းသောကြောင့် သူမရောင်ရမ်းခဲ့ဒါလို့ ချက်ချင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ် ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ လူအတော်များများက ၎င်းအရာဟာ အလှကုန်တက်တူးဖြန်းဆေးမှ မမှန်မကန်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အမှားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ … Read more
မီးအိမ္ရွင္မေလးအၿငိမ္း ဆိုတာေနာက္ဆုံးေတာ့ စကစရဲ႕ ဒလန္ျဖစ္ခဲ့ၿပီးလား
မီးအိမ်ရှင်မလေးအငြိမ်း ဆိုတာနောက်ဆုံးတော့ စကစရဲ့ ဒလန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးလား လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်မှစပြီး ဒေါက်တာအငြိမ်းကို အလှူငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လိမ်ညာခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲပြောဆို တာတွေ ရှိလားခဲ့ပါတယ်။ ထိုစွပ်စွဲချက်တွေဟာ အလိမ်အညာ သပ်သပ်သာ မဟုတ်ဘဲ အမှန်တွေဆိုတာ ပြည်သူတစ်ဦးက ဖော်ထုတ်လာခဲ့ပါတယ်။ ထိုအလှူအငွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့လည်း KNDF သည် ဒေါက်တာအငြိမ်း ထံမှတစ်ဆင့် Heal the World အဖွဲ့ထံမှထောက်ပံ့ ငွေများ နှစ်ကြိမ်တိတိ လက်ခံခဲ့သည် ဖြစ်ကြောင်းကို KNDF မှလည်းကြောငြာခဲ့ဖူးပါတယ်။ ထိုကြောငြာချက်တွေက အလိမ်အညာတွေ ဖြစ်တယ်လို့လည်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ KNU တပ်မဟာ၂ နဲ့ တပ်မဟာ၇ ကတပ်သားတွေလဲပြောတယ်။ အငြိမ်းလှူတယ်လို့ ပြောခဲ့တာတွေ တကယ်မရဘူး။ အငြိမ်းက တော်လှန်ရေးမှာ အဖျက်သက်သက် ဝင်လာတာ။ အငြိမ်းက သူ့ကိုလှူတဲ့ထဲက ၂၀-၂၅%လောက်ပဲပြန်လှူခဲ့တာ … Read more
သင့်ရဲ့ဘဝမှာ သင့်ကို လိုသုံးလုပ်သွားသူတွေ တစ်ယောက်ထက်မနည်း ရှိပါလိမ့်မယ်။ လိုသုံးလုပ်သွားသူတွေက ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကို အနှောင့်အယှက်ပေးသူတွေပါ။ အဲဒါကြောင့် လိုသုံးလုပ်သွားသူတွေအတွက်နဲ့ စိတ်ညစ်မခံဘဲ လှလှပပ တုံ့ပြန်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို love media ကနေ ဖော်ပြပေးပါမယ်နော်။ ၁။ သူတို့ကို ပြဿနာ ဖြေရှင်းနည်း မပေးပါနဲ့။ သင့်ကို တကယ် ချစ်ခင်တာမဟုတ်ဘဲ လိုအပ်မှ လာသူအတွက် စိတ်အင်အား၊ လူအင်အား အပင်ပန်းမခံပါနဲ့။ သူတို့ကို ပွေ့ဖက်ပြီး အဆင်ပြေသွားမှာပါ လို့ပဲအားပေးလိုက်ပါ။ ၂။ စိတ်ကျန်းမာရေး အကြံပေးထံ ခေါ်သွားပေးလိုက်ပါ။ သူတို့မှာ အမြဲ မပျော်ရွှင်နေရဘူးဆိုရင်၊ ပြဿနာကို အဆုံးမသတ်နိုင်တော့ဘူး ဆိုရင် သူတို့ကို နှစ်သိမ့်ပေးမယ့်သူ လိုအပ်နေပါပြီ။ သင့်ကို လိုသုံးလာလုပ်တဲ့အတွက် အချိန်ကုန်မခံပါနဲ့တော့။ စိတ်ကျန်းမာရေး အကြံပေးနဲ့ တိုင်ပင်ဖို့ လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါ။ … Read more
၀ဋျလညျတတျတယျ အချိန်(၁)မိနစ်စာလေးပေးပြီး ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်
ရော့… အမေ၊ဒီမှာပိုက်ဆံတစ်သိန်း။ သူ့မြေးလေးနဲ့ကစားနေရာက အမေမော့ကြည့်လာတယ်။ ဘာအတွက်လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးနဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့။ ဘာလုပ်ဖို့လဲသမီး။ အမေအိမ်ကိုခဏခဏမလာပါနဲ့၊ သမီးကသူများအိမ်မှာလာနေရတာ၊ ယောက္ခမတွေအမြင်ကြည်အောင်နေရတယ်။ သမီးရယ်အမေကပိုက်ဆံ လာတောင်းတာမှမဟုတ်တာ အမေ့မြေးလေးနဲ့လဲ သမီးကတစ်လနေလို့ အိမ်တစ်ခေါက်မရောက်ဘူး။အမေ့မြေးလေးကိုလွမ်းလို့ လာတာပါသမီးရယ်။ သမီးအဖေကတားပါတယ်၊ အမေလည်းနှစ်ပတ်လောက်နေမှ တစ်ခါလာတာလေ သမီးအဖေကလဲသူ့သမီးနဲ့ သူ့မြေးလေးကိုတွေ့ချင်နေတာ ဒါပေမယ့်သူမလိုက်ချင်လို့ သမီးကိုလာလည်ဖို့လဲပြောလိုက်ပါတယ်ကွယ်။ သမီးသိပါတယ်၊ အမေတို့ဆီကိုလဲ သမီးနှစ်လတစ်ခါလောက်လာတာပဲ။ ပိုက်ဆံလဲလာလာပေးနေတာပဲကို၊ ခုအမေပြန်ပါတော့၊ သမီးယောက်ကျားပြန်လာတော့မယ်။ အမေ့ကိုမြင်ရင် သူအမောမပြေပဲနေမယ်။ အင်းပါသမီးရယ်၊ အမေနောက်မလာတော့ပါဘူး။ သမီးတော့လာလည်ပါနော်၊ အမေသွားတော့မယ်။ ဖွားသွားတော့မယ်မြေး လိမ်လိမ်မာမာနေနော်။ မျက်ရည်တွေဝဲလျက် အသံတုန်တုန်လေးနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဖြောင်း ဖြောင်း ဖြောင်း ။ လက်ခုပ်သံကြားရာ လှည့်ကြည့်မိလိုက်ပါတယ်။ ရှစ်နှစ်အရွယ်ကလေး ကျမသမီးလေး၊ ပြုံးရယ်ပီးလက်ခုပ်တီးနေတာပေါ့။ ဘာတွေသဘောကျပီး လက်ခုပ်တီးတာလဲသမီးလေး။ မေမေအိုင်တင်အရမ်းကောင်းတာပဲ။ ဇာတ်လမ်းတွေထဲက မင်းတမီးကြနေရာပဲ။ မျက်နှာတွေပြောနေတာတွေကအရမ်းမိုက်ရို့။ ဖွားရောပဲမျက်ရည်လေးတွေဝဲနေတာ … Read more